Xildhibaan ka digaya in ay halis gaari doonto haddii aan laga hortagin biyo yari ka jirta Hiiraan – Kalfadhi
Xildhibaan Maxamed Bashiir Qaasim (Daqarre), oo ka tirsan Baarlamaanka Hirshabeelle, ayaa wareysi uu siiyay Kalfadhi walaac uga muujiyay xaalad biyo yari ah, oo ka taagan degmooyin iyo degaanno katirsan Gobalka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya.
Xildhibaanka ayaa sheegay in dadka ku nool degaano dhawr ah, oo hoos yimaada magaalada Beladweyne ee xarunta Gobalka Hiiraan, ay wajahayaan biyo yari saameyn wayn ku yeelatay dadka iyo duunyada, waxa uuna sheegay in ay u baahan yihiin gargaar deg deg ah.
“Biyo yari wayn ayaa ka jirta magaalada Beladweyne degaanada ku dhow, waxayna saameyn wayn ku yeelatay kumanaan dad ah” ayuu Xildhibaan Daqarre ku yiri Kalfadhi. “Ceelashii biyaha waa ka gurayn, meelihii kale ee warahana iskaba daa, dadkii iyo duunyadii waxay wajahaan kuleel daran” ayuu Xildhibaan Daqarre raaciyey warkiisa.
Xildhibaan Maxamed Bashiir Qaasim ayaa sheegay in qoysaska qaar ay isticmaalayaan biyo wasaqaysan, oo aan xoolo iyo bini’aadamba cabi karin, waxa uuna ka digay cudurro ka dhasha biyahaas wasaqaysan, oo ay isticmaalaan qaar kamid ah dadka ku nool degaanada hoos yimaada magaalada Beladweyne ee xarunta Gobalka Hiiraan.
“Dadka qaar waxay cabaan biyo wasaqasan, hadii aan laga hortagin waxaa ka dhalanaya cudurro halis ah” ayuu Xildhibaan Daqarre ku yiri wareysiga uu siiyey Kalfadhi.”Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Maamulka Hirshabeelle waxaan ka dalbanayaa in ay si deg deg ah ugu gargaaraan shacabkaasi dhibaataysan” ayuu hadalkiisa raaciyay.
Inta badan marka la gaaro bishan Maarso waxa ay xaaladda nololsha bilowdaa in a ku adkaato dadka iyo duunyada ku nool dhulka miyiga ah ee fog, kuwaas oo marka ay roobabku ka soo daahaan Soomaaliya ama ay ku yaraadaan wajaha abaar leh cuno iyo cabitaan la’aan. Badanaa, waxaa saameynta xaaladahaas la dareemaa marka ay dhibtu gaarto in naftu go’do.
Golaha wakiillada Puntland oo maanta loo qaybiyay miisaaniyadda saggaalka bilood ee soo socda